Sawirro: Wafdigii uu hogaaminayey Abshir Bukhari oo la kulmay Madaxda Galmudug - Ceelhuur Online
Home > Wararka Galmudug > Sawirro: Wafdigii uu hogaaminayey Abshir Bukhari oo la kulmay Madaxda Galmudug
Sawirro: Wafdigii uu hogaaminayey Abshir Bukhari oo la kulmay Madaxda Galmudug
September 27, 2017 September 27, 2017 admin584
Waxaa maanta soo gaaray Magaalada Cadaado wafdi xildhibaano ah, oo uu hogaaminayey gudoomiye ku xigeenka 1-aad aqalka sare Barlamaanka Soomaaliya Abshir Bukhaari. Wafdiga ayaa kulamo saxaafaddu dib joog ka aheyd la qaatay Madaxda Galmudug.
Ugu horeyn wafdiga ayaa la kulmay Madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale, iyagoo ka dhageystay xaaladda khilaafka siyaasadeed ee soo kala dhexgalay Madaxda Sare Galmudug. intaas kadib ayey wafdigu la kulmeen Madaxweyne ku xigeenka iyo Gudoonka Barlamaanka.
Kulmada oo waqti badan qaatay ayaa la filayaa inay sii socon doonaan caawa ilaa beri, iyadoo kolka ay soo idlaadaan ay wafdigu la hadli doonaan warbaahinta si ay ugu bandhiga natiijada howshooda, sidoo kale wafdiga ayaa la kulmi doona Xildhibaanada, Wasiirada iyo Bulshada Galmudug, iyagoo is weydaarsan doonaan habka lagu xalinayo khilaafka taagan.
Mudanayaashaan Cadaado soo gaaray ayaa kala ah
Senator Abshir Bukhaari
Xildhibaan Mahad Maxamed Salad
Xildhibaan Saabir Nuur Shuuriye
Xildhibaan Axamed Macalin Fiqi
Senator Cabdi Xassan Cawaale qeybdiid
Xildhibaan Xasan Macalin
Xildhibaan Cabdiwali Qanyare
Xildhibaanad Sahro Cumar
Senator Jawaahir Axmed Cilmi
Xildhibaan Warsame Maxamed Cabdi (Joodax)
Wixii war ah ee kusoo kordha kala soco ceelhuur.com
Deg Deg Wafdi uu Hugaaminayo Abshir Bukhaari Oo Cadaado Gaaray iyo Kulamo hada Socda
Harry Redknapp Oo Jeclaan Lahaa In Uu Ku Laabto Shaqada Tababarnimo
Wareysiyada iyo u diyaar garoow la’aanta Mas’uuliyiinta.
DEG DEG: Toogasho Goordhow ka dhacday Jowhar
Danjire cali fiqi oo cadeeyay mowqifka dowlada ee ku aadan dalabka kenya ee dib udhigista dhagaysiga dacwada badda